Danjire Keating oo Hambalyo u diray Guddoomiyaha Cusub ee Barlamaanka Federaalka – Radio Daljir
Danjire Keating oo Hambalyo u diray Guddoomiyaha Cusub ee Barlamaanka Federaalka
Maajo 1, 2018 8:20 b 0
Ergeyga Xoghayaha Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ayaa u hambalyeeyay Gudoomiyaha cusub ee Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan kaasi oo maanta la doortay.
Qoraal ka soo baxay Xafiiska Ergayga Qaramada Midoobay ee arrimaha Somaliya, ayaa lagu sheegay in doorashada Gudoomiyaha cusub ay muujinayso sida Somaliya ay u gaartay hanaanka dimuqraadiyadda.
Keating ayaa ammaaney shaqadii uu soo qabtay gudoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, isagoo soo jeediyey inay wada shaqeyn iyo isfaham yeeshaan Fulinta iyo sharci dejinta.
Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ku guuleystay doorashadii golaha Shacabka isaga oo helay 147 cod, waxaa uuna hoggaamin doonaa golaha saddexda sano ee soo socota.
Waxa kale uu kula dardaarmay inuu ka shaqeeyo arrimaha dajinta shuruucda kala duwan ee dalka xilligaan u baahan yahay, marka loo eego shaqooyinka hor yaalla Gudoomiyaha cusub ee Baarlamaanka Somaliya.
Arday gaaraysa 510 Arday oo u fariistay Imtaxanadka Jamacadda Bariga Africa Gaalkacyo (dhegayso)
Hargeysa Sadex qof ayuu daad qaaday kadib marki roob xoogan uu qabtay